'La Casa de Papel 5' - Netflix को सफलता कि एक अन्त आउँछ | बेजिया
'La Casa de Papel 5': Netflix को सफलता
सुसाना Godoy | 07/09/2021 14:00 | समाचार
को नयाँ किस्ता 'द पेपर हाउस ५'। नयाँ सिजन जुन दुई मा विभाजित छ। यो धेरै बारम्बार हुन्छ जब श्रृंखला यसको अन्तिम नतिजामा पुग्नको लागी यो मामला जस्तो देखिन्छ। तर यस बीचमा, Netflix एक पटक फेरी यस जस्तै श्रृंखला को सफलता को लागी धन्यवाद को मंच को प्लेटफर्म भएको छ।
जे होस् हामी राम्ररी जान्दछौं, यो यो मा जन्मेको थिएन तर हामीले यसलाई पहिलो पटक एन्टेना ३ मा देख्यौं। तर यो सत्य हो कि प्लेटफर्ममा उफ्रने लाखौं मानिसहरुलाई यो एक प्रयास दिन सक्षम बनायो र यसरी बन्नुहोस् हाम्रो सीमा भित्र र बाहिर घटना जुन साँच्चै हो। के तपाइँ पहिले नै पहिलो5अध्याय देख्नुभएको छ?
1 'La Casa de Papel 5' दुई भागमा विभाजित
2 ला Casa de Papel को नयाँ सीजन
3 त्यहाँ ला कासा डे पपेल को लागी एक भविष्य हुनेछ?
'La Casa de Papel 5' दुई भागमा विभाजित
यात्रा लामो भएको छ, धेरै सहभागिता र कहिले काँही कटु विदाई संग, जस्तै उनीहरु सधैं छन्। तर हामी एउटा श्रृंखला को पाँचौं सिजनमा पुग्यौं जुन एक मात्र थियो। जसरी हामीले उल्लेख गरिसकेका छौं, रातो जम्पसुट र डालीको मास्कमा यसको नायक हाम्रो देश भित्र र बाहिर महान पात्र बन्नुभएको छ। तर यो सत्य हो कि हरेक राम्रो कथा को पनि अन्त्य गर्न को लागी हामी राम्रो संग जान्दछौं। जे होस् यसले हामीलाई चोट पुर्याउँछ, यो सत्य हो कि उनीहरु शैलीमा अन्त्यको लायक छन्। यसैले सेप्टेम्बर3मा, सीजन5को पहिलो5एपिसोड रिलीज भयो र अन्य5डिसेम्बर3मा Netflix मा आउनेछन्। हो, यस वर्ष श्रृंखला समाप्त हुनेछ।
ला Casa de Papel को नयाँ सीजन
न त हामी बिगार्नको लागी जाँदैछौं किनकि तब हामी पहिले नै जान्दछौं कि के हुन्छ, त्यसैले हामी मात्र यसो भन्छौं कि चौथो सीजन को अन्तिम एपिसोड पछि, हामी जतिसक्दो चाँडो पाँचौ चाहिन्छ। यो सत्य हो कि त्यस समयमा त्यहाँ धेरै सिद्धान्तहरु थिए कि चौथो अन्त हुनेछ। तर हावा मा यति धेरै फ्रेमहरु छोडेर सायद हामीलाई सुराग दियो कि पाँचौं आउनेछ र आइपुग्यो।
तर यो दुई गोल मा आउँछ र यस्तो लाग्छ कि Álex पिना केहि योगदान गर्न चाहन्थे कि दर्शकहरु लाई आशा थिएन। किनकि जे होस् यो दुई ब्याच मा विभाजित छ, यो साँचो हो कि लगभग हल नभएको भूखंडहरु लगभग पहिलो भाग मा बनाइनेछ। यसबाहेक, जब १० अध्याय एकै समयमा जारी गरीन्छ, जनता पहिले नै जान्दछन् वा अज्ञात कहाँ हल गर्न शुरू हुनेछ को बारे मा स्पष्ट छ। भन्ने उल्लेख छ 'ला कासा डे पपेल ५' को दोस्रो भाग प्रत्येक पात्र को भावनात्मक विमान को लागी अधिक पूरा गर्दछ र यस प्रकार यो सीधा विदाई संग जोडिएको हुन सक्छ।
त्यहाँ ला कासा डे पपेल को लागी एक भविष्य हुनेछ?
यस बिन्दु मा, ती सबै प्रशंसकहरु जो श्रृंखला को अन्त्य गर्न चाहँदैनन्, नयाँ विकल्पहरु लाई विचार गर्न शुरू गर्नुहोस्। त्यहाँ कुरा भएको छ कि शायद केहि चरित्र ले लिन्छ र त्यहाँ एक नयाँ श्रृंखला मा आधारित हुन सक्छ वा सायद, धेरै बर्ष पछि, शुरुवात बिन्दु मा फर्कनुहोस् जस्तै धेरै अन्य शीर्षकहरु संग भएको छ जुन हामी पहिले नै जान्दछौं। एक क्षणकाे लागी, हामी १० एपिसोड को लागी बसोबास गर्नु पर्छ, जुन हामी भन्छौं कि दुई भागहरुमा विभाजित छ.
यो सिजन एक धेरै जटिल रेकर्डि had भएको छ, कोरोनाभाइरस स crisis्कट को कारण र यो पनि कारण को लागी कि प्रत्येक अध्याय एक घण्टा लामो छ, जसको मतलब यो छ कि यो थोरै बढाइएको छ। यसको परिदृश्यहरु मध्ये हामी डेनमार्क, साथ साथै स्पेन र पनि पोर्चुगल छ। यो हरेक तरिका मा सबैभन्दा रोमाञ्चक मौसम मध्ये एक हो। किनभने यो ब्यान्ड र पनी प्रोफेसर लगभग, लगभग सीमा को बारे मा राख्नु भएको छ। नयाँ पात्रहरु र एक बन्द छ कि अन्तिम स्पर्श हुन को लागी लक्ष्य मा शर्त को अतिरिक्त। उनीहरु पक्का हुनेछन्!
लेखको पूर्ण मार्ग: बेजिया » समाचार » 'La Casa de Papel 5': Netflix को सफलता
कसरी मांसपेशी प्राप्त गर्न को लागी तर तौल को आवश्यकता बिना
समाप्ति मिति र मिति भन्दा पहिले सबै भन्दा राम्रो बीचको फरक